Maninona ianao no tsy tokony hividy tranokala vaovao intsony | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 29, 2021 Alahady, Aogositra 8, 2021 Douglas Karr
Hanjary ho romotra ity. Tsy mandalo herinandro fa tsy manana orinasa manontany ahy aho hoe ohatrinona no takianay tranonkala vaovao. Ny fanontaniana dia nanangana saina mena ratsy tarehy izay midika matetika fa mandany fotoana ho ahy ny fanenjehana azy ireo amin'ny maha-mpanjifa ahy. Fa maninona Satria mijery tranonkala iray izy ireo ho toy ny tetikasa static izay misy fiandohana sy fiafarany. Tsy… fa fampitaovana izay tsy maintsy hasiana fanatsarana sy fanovana hatrany.
Mihoatra lavitra ny tranonkalanao ny fahaizanao
Andao atomboka amin'ny antony anananao tranonkala iray hanombohana azy. Ny tranonkala iray dia ampahany manakiana anao fanatrehana nomerika amin'ny ankapobeny izay amboarina ny lazanao ary afaka manome fampahalalana ilain'ny olona mety ho mpanjifa ianao. Ho an'ny orinasa rehetra, ny fisian'izy ireo nomerika dia tsy tranokalan'izy ireo fotsiny… tafiditra ao anatin'izany:
Ireo tranokala - miseho amin'ny tranokala itadiavan'ny olona ny vokatra na serivisiny ve izy ireo? Angi, Yelp, na lahatahiry kalitao hafa angamba.
Naoty sy toerana hijerena - Miaraka amin'ireo lahatahiry, miseho amin'ny tranokala fanamarihana ve izy ireo ary mahafehy tsara izany laza izany ve izy ireo? Mangataka famerenana ve izy ireo, mamaly azy ireo, ary manitsy ireo hevitra tsy dia tsara?
YouTube - Manana horonantsary ao amin'ny YouTube izay kendrena mankany amin'ny tsenany sy ny indostrian'izy ireo ve izy ireo? YouTube no motera fikarohana lehibe indrindra faharoa ary mpanentana mitsikera ny horonan-tsary.
Toerana fampiarana - Misy tranokala sy toetran'olona manana fahefana ve izay manana mpanaraka marobe avy amin'ny mpihaino nizara? Manenjika ny hahafantarana anao amin'ireo tranonkala ireo ve ianao?
Search Engines - Ny mpividy dia mikaroka fatratra ny fampahalalana an-tserasera hanampiana azy ireo amin'ny fizotrany fanapaha-kevitra. Manatrika an'izay tadiavin'izy ireo ve ianao? Manana a tranomboky atiny tsy tapaka ve izany?
Social Media - Ny mpividy dia mijery fikambanana an-tserasera izay manome lanja mitohy sy mamaly ny mpanjifa. Manampy ny olona amin'ny fantsona sosialy sy amin'ny vondrona an-tserasera ve ianao?
mailaka Marketing - Mampivelatra diany, taratasim-baovao, ary haino aman-jery fifandraisana ivelany hafa izay manampy ny mpividy ho tonga hitety ilay dia?
Advertising - ny fahazoana ny toerana sy ny habetsaky ny ezaka sy teti-bola tokony hampiharina hahazoana fitarihana vaovao manerana ny Internet dia tsy azo odian-tsy hita.
Ny fandrindrana ny fisianao dizitaly amin'ny salantsalany sy fantsona rehetra dia filàna tanteraka ankehitriny ary mihoatra ny fananganana fotsiny izany ao amin'ny tranokala vaovao.
Tsy tokony ho toy izany mihitsy ny tranokalanao vita
Tsy izany mihitsy ny tranonkalanao vita. Fa maninona Satria mbola miova hatrany ny indostria iasanao. Ny fananana tranokala dia toy ny fanananao sambo izay itetezanao rano mangarahara. Mila manamboatra tsy tapaka ireo fepetra ianao - na mpifaninana, mpividy, algorithma fikarohana, teknolojia mipoitra, na koa ireo vokatra sy serivisinao vaovao. Tsy maintsy manohy manitsy ny fitetezanao ianao mba hahombiazanao amin'ny fisarihana, fampahalalana ary famadihana ireo mpitsidika.
Mila fampitahana hafa? Toy ny manontany olona hoe: “Ohatrinona ny vidin'ny fahasalamana?”Ny fahasalamana dia mitaky fihinanana salama, fanatanjahan-tena ary fanamafisana orina rehefa mandeha ny fotoana. Indraindray misy fihemorana misy maratra. Indraindray dia misy aretina. Saingy ny fahasalamana dia tsy misy teboka farany, mitaky fikojakojana sy fanitsiana tsy tapaka izany rehefa mihalehibe isika.
Misy fanovana maromaro izay mila refesina sy dinihina ary hohatsaraina hatrany amin'ny tranokalanao:
Famakafakana fifaninanana - fanitsiana sy fanatsarana mba hanavahana ny tenanao amin'ny fifaninanana ataonao. Rehefa mamokatra tolotra izy ireo, mizara fankasitrahana, ary manitsy ny vokatra sy ny tolotra serivisiny, dia betsaka aminao.
Famerenana fanavaozana - ny fironanao amin'ny fanangonana fitarihana sa ny mpanjifa mitombo sa mihena? Ahoana no fanamorana izany? Manana chat ve ianao? Click-to-Call? Fomba mora ampiasaina?
Teknolojia vaovao - arakaraky ny andrasana ny haitao vaovao, hampihatra azy ireo ve ianao? Ny mpitsidika tranonkala ankehitriny dia manana fanantenana samihafa, maniry ny hanompo tena. Ohatra iray lehibe ny fandaharam-potoana amin'ny fanendrena.
Fandrosoana mandroso - bandwidth, fitaovana, haben'ny efijery… mitohy mandroso ny teknolojia ary mamolavola traikefa ho an'ny mpampiasa izay mahazaka ireo fanovana ireo dia mila fanovana tsy tapaka.
Search Engine Optimization - lahatahiry, tranokala fampahalalana, famoahana boky, tranokalam-baovao, ary ny mpifaninana aminao dia samy manandrana mikapoka anao amin'ny motera fikarohana satria ireo mpampiasa ireo dia manana fikasana lehibe hividy. Ny fanaraha-maso ny laharam-pahamehanao amin'ny teny lakile sy ny fanatsarana ny atiny dia manandanja amin'ny fitazonana an-tampon'ity haino aman-jery mitsikera ity.
Na ny masoivohom-barotra na ny matihanina karamanao dia tokony ho fantatrao tsara momba ny indostriao, ny fifaninanana, ny fanavahana anao, ny vokatrao sy ny serivisinao, ny marikao ary ny paikadim-pifandraisanao. Tsy tokony haneso ny endrika iray fotsiny izy ireo ary hanome vidiny ny fampiharana an'io endrika io. Raha izany no ataon'izy ireo dia tokony hahita mpiara-miasa marketing vaovao ianao hiara-miasa aminy.
Ampiasao amin'ny fizotran'ny marketing nomerika fa tsy tetikasa
Ny tranonkalanao dia fitambaran'ny teknolojia, ny endrika, ny fifindra-monina, ny fampidirina ary, mazava ho azy - ny atiny. Ny andro ny tranonkala vaovao Ny velona dia tsy ny teboka iorenan'ny tetik'asa varotra nomerika anao, Andro voalohany amin'ny fananganana fisian'ny marketing nomerika tsara kokoa. Tokony hiara-miasa amin'ny mpiara-miasa aminao ianao izay manampy anao hamantatra ny drafitra fametrahana amin'ny ankapobeny, manome laharam-pahamehana ny dingana tsirairay ary manampy amin'ny fanatanterahana izany.
Na fampielezan-kevitra dokam-barotra izany, famolavolana paikady video, fanaovana sarintany ny dian'ny mpanjifa, na famolavolana pejy fananganana… ianao dia tokony hampiasa vola amin'ny mpiara-miasa iray izay mahatakatra ny fiarahan'ny zava-drehetra. Ny tolo-kevitro dia ny hanipy ny teti-bolan'ny tranonkalanao ary, hamaritana ny fampiasam-bola tadiavinao hatao isam-bolana hanohizana hanatanteraka ny paikadim-barotra nomerika.
Eny, fananganana a tranonkala vaovao mety ho tafiditra ao anatin'io paikady ankapobeny io, saingy dingana fanatsarana mitohy… tsy tetikasa tokony ho vitaina mandrakizay.
Tags: fahafahana misafidyfanatsarana mitohyfanavaozana fiovam-poNew Websiteteti-bolan'ny tranonkalavidin'ny tranokalaweb design
Fironana 8 amin'ny teknolojia lozisialy fivarotana